XY Doll - TPE Ọkpụkpụ Ọkpụkpụ Ọbara - Urdolls
168cm C Cup Silicone Isi Ihu S etemeete Jelly Chest Road Satsuki EVO Skeleton XY Doll
168cm C cup silicone head face S makeup EVO ọkpụkpụ jelii obi XY Doll
168cm C cup silicone isi EVO ọkpụkpụ ihu S etemeete jelii obi misa XY Doll
Ihu S Makeup 168cm C Cup Silicone Head EVO Skeleton Jelly Chest Chuanxia XY Doll
170cm E iko silicone isi na ihu S etemeete jelii obi isabelEVO ọkpọ XY Doll
170cm E Cup Silicone Head jelii ara Wheat Face S etemeete EVO ọkpụkpụ XY Doll
168cm C Cup Silicone Head Original Beibei Ihu S etemeete EVO Skeleton Jelly Chest XY Doll
148cm D cup silicone head EVO ọkpọ jelii ara na ihu S etemeete XY Doll
158cm C Cup Silicone Isi Ihu S etemeete EVO Jelly Chest Frame XY Doll
158cm C Cup jelii Igbe Silicone Isi Ihu S etemeete EVO Skeleton XY Doll
170cm E Cup Silicone Head EVO Skeleton Jelly Breast Wheat Agba Ihu S Mma Etinye XY Doll
170cm E Cup Ihu Ihu S Makeup EVO Skeleton Jelly Chest Wheat Silicone Head XY Doll
Isi Silicone 170cm E iko ihu S etemeete EVO ọkpọ jelii obi XY Doll
148cm D Cup Face S Etemeete EVO Skeleton Jelly Chest Silicone Head XY Doll
158cm C Cup Silicone Head EVO Skeleton Face S Makeup Jelly Chest XY Doll
140cm B iko silicone isi EVO ọkpọ jelii ara na ihu S etemeete XY Doll
140cm B cup silicone head skeleton jelii bust face S makeup EVO XY Doll
140cm B Cup Silicone Isi Ihu S etemeete EVO Skeleton Jelly Chest XY Doll
158cm C cup silicone isi na ihu S etemeete jelii corsage EVO ọkpọ XY Doll
168cm C Cup Silicone Head Wheat Ibel Ihu S etemeete EVO Skeleton Jelly Chest XY Doll
170cm E Cup Silicone Head Jelii Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Eyo Skeleton XY Doll
170cm E Cup Silicone Head Wheat Agba Rice Yarn Ihu S etemeete EVO Skeleton Jelly Chest XY Doll
168cm C cup silicone isi ihu S etemeete EVO ọkpọ jelii obi misa XY Doll
158cm C Cup Silicone Head Jelly Bust Ihu ihu S etemeete EVO Skeleton XY Doll
158cm C cup ihu S etemeete Ekele ọkpụkpụ silicone isi XY Doll
158cm C Cup jelii Bust Face S Eteme Silicone Isi Ifuru na-eche Egwu Skeleton XY Doll
158cm C Cup Ifuru Xiaorong Jelly Bust na Face S etemeete Silicone Head EVO Skeleton XY Doll
Na -eji etemeete ahụ zuru oke na ezigbo arịa ọbara maka XY Doll
XY Doll bụ ngwaahịa ama ama n'ụwa niile. Ebe a na -arụ ọrụ ika mba ofesi dị na Shenzhen, China. XY Dolls bụ onye ọsụ ụzọ na onye isi nke silicone head + TPE ahụ ịme anwansị arịa ọbara. Ọ na-eji teknụzụ ịkpụzi ndụ emegharị ahụ anụ ahụ n'ezie 1: 1 na ụdị anụ ahụ. Nkọwapụta bụ nwa bebi mmekọahụ dị adị n'ezie, ịchụ nkọwa zuru oke, etemeete ihu ka na -anụcha ma na -eulatedomi, na -ese ahụ, a na -ejikwa ezigbo arịa ọbara + ahịrị ejiri etemeete ahụ.
Eke:XY nwa bebi
Okwu Mmalite ： XY Doll na-eji polymer dị elu na ihe ịchọ mma na-acha ọcha mmanụ, nke na-enweghị isi pụrụ iche, nkwụsị anya mmiri, nguzogide ihu igwe, na arụmọrụ njikwa mmanụ. Ogwe XY Doll na-eji ụkpụrụ dị elu nke nchara mba, na-ejikọkwa njikọ ndị ahụ na gaskets mmiri dị ọcha. Mgbasawanye ọkụ na ịrụ ọrụ arụmọrụ na-adịwanye jụụ; XY Dol body shape: nakweere usoro ịkpụzi ihe eji ebi ndụ, 1 ka 1 na-edegharị ụdị ụdị ndụ dị adị n'ezie, yana ederede anụ ahụ, nkọwa ndị ahụ dabara adaba, na ịchụso nkọwa zuru oke.
+ Nwa bebi mmekọahụ TPE nke nwere ogo dị elu + Nmegharị ụgbọ mmiri ọbara
+ Detuo ezigbo ihe nlereanya
141cm XY nwa bebi
148cm XY nwa bebi
152cm XY nwa bebi
158cm XY nwa bebi
168cm XY nwa bebi
170cm XY nwa bebi